Somali News 3.22.22
Published March 23, 2022 at 9:36 AM CDT
Taliyaha Booliska Magaalada Sioux ayaa walaac ka muujiyay tirada sii kordheysa ee fentanyl-ka ku qulqulaya bulshada.
Mueller wuxuu sheegay in iibiyayaashu ay inta badan ku dhejiyaan fentanyl daroogooyinka kale, isticmaalayaashuna waxay la kulmaan cawaaqib dilaa ah.
Rex Mueller ayaa faallooyinkiisa u jeediyay naadiga Sioux City Rotary Club toddobaadkan.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa sheegay in heerka COVID-19 uu si aad ah hoos ugu dhacay inaysan mar dambe bixin doonin warar maalinle ah. Waaxda caafimaadka ee gobolka ayaa hadda bixin doonta kaliya warbixinnada toddobaadlaha ah Arbacada. Celceliska todobada maalmood ee kiisaska togan ee South Dakota waxay ahayd kaliya 35. Marka loo eego CDC, kaliya shan gobol ayaa ka hooseeya heerka madax-weyne ee kiisaska cusub.
Sharci-dajiyayaal dimuqraadi ah ayaa ku dhaleeceeyay Aqalka Jamhuuriga inay soo jeediyeen inaan wax miisaaniyad ah loo kordhin jaamacadaha dadweynaha ee Iowa muddo saddex sano ah.
Xubnaha GOP House ee Iowa waxay rabaan inay 12-milyan oo doollar siiyaan jaamacadaha maamulaha si ay u helaan barnaamij deeq waxbarasho oo cusub. Laakiin ma soo jeedinayaan lacag dheeraad ah kharashkooda hawlgelinta guud. Taliyayaasha ayaa codsaday 22-milyan oo doolar dheeraad ah sanadkan.
Jaamacadda Briar Cliff waxay raadin doontaa madaxweyne cusub ka dib markii hogaamiyaha hadda ee Rachelle Keck (keh-k) loo doortay inay hogaamiso Jaamacadda Grand View ee Des Moines. Keck waxa uu noqonayaa madaxweynihii 14-aad ee Grand View ka dib markii uu isla doorka Sioux City ka soo shaqeeyay tan iyo 2018.
Diocese-ka Katooliga ee Sioux City ayaa ka qaybqaadan doona ka-fiirsashada adduunka oo dhan ee Ukraine toddobaadkan. Bishop Nickless ayaa ku martiqaaday dadweynaha inay ka qayb qaataan ducada ee Cathedral of the Epiphany ee Sioux City jimcaha saacadu markay tahay 11:00.